गलबन्दीको सन्दर्भमा चाहिं ‘सिनियर’ शम्भु राईले ‘जुनियर’ प्रकाश सपूतलाई थकाएर छाडे । सिनियरसँग सम्झौता भएको भोलिपल्ट उनले बताए, ‘यो विवाद मेरा लागि अनावश्यक तनावका रूपमा आयो । बितेका केही दिन मैले केही गर्न सकिनँ । कुनै सिर्जनामा ध्यान गएन । अहिले पो थाहा भयो कानुन त आफैं कन्फ्युज रहेछ । यहाँ त कोही सर्जक सुरक्षित रहेनछन् ।
किशोर नेपाल, असार १९, २०७६
भनसुन र मनसुनको कुनै सम्बन्ध छ जस्तो लाग्दैन । भनसुन स्थायी क्रिया हो भने मनसुन सर्वनाम । सर्वनाम भनेर थिएटरको कुरा उठाएको होइन । मनसुनमा थिएटरको बिजनेस पनि सार्‍है जाग्छ । के हुन्छ ? थाहा छ ? छाता धेरै बिक्छ, तर होइन, बिक्दैन । पोहोर आधा पनि बिकेन । अचेल मानिसहरू भिजेर, रुझेर हिंड्न रुचाउँछन् तर छाता बोक्न चाहँदैनन् । छाता ओढ्ने रहर कसैमा देखिँदैन । मानौं छाता नभएर डायबिटिजको ओखती हो ।
कान्तिपुर फूर्तिलो छ, जोशिलो छ । त्यसैले त रन्जन यहाँ आएका हुन् । यहाँ उनी पनि जमे र उनको सांगीतिक ब्याण्ड जिरो माइल पनि जम्यो । उनी स्वर श्रष्टा हुन् । अडियो तयार गर्छन् । विज्ञापन सामग्री तयार गर्छन् । जिंगलहरू तयार गर्छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनको लोगो तथा समाचार संगीत उनैले तयार गरेका हुन् । वृत्तचित्र राम्रो बनाउँछन ।
किशोर नेपाल, जेष्ठ ३२, २०७६
एकातिर ईश्वरको स्वामित्वमा रहेका जग्गा निजी स्वामित्वमा दर्ता हुने अभियान चलिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सरकारको हकदावी नलाग्ने वातावरण बन्दै गएको छ । डेढ दशकअघि हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको थियो– नेपाल ट्रस्ट ।
किशोर नेपाल, जेष्ठ २३, २०७६
किशोर नेपाल, जेष्ठ १६, २०७६
कान्तिपुर सहरको इतिहास उज्ज्वल थियो । वर्तमान अलिकति खजमजिएजस्तो देखिए पनि सहर अँध्यारो नै भैसकेको छैन । हो, समय जटिल भएको छ । देशको राजनीति राष्ट्रिय एजेन्डाको शीर्षस्थानमा छ, तर यसले आमूल परिवर्तनका लागि, छिटो विकासका लागि, जनताको हितका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । विकासका चर्का नाराहरू सुनिएका छन् ।